စက်တင်ဘာလအတွက် LEGO စတိုးဆိုင်ပြက္ခဒိန်သည်လာမည့်လျှော့စျေးများကိုဖော်ပြသည်
28 / 08 / 2021 28 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 591 Views စာ0မှတ်ချက် 30563 မင်းရဲ့ခရုတွေကို Superpowers တွေနဲ့လုပ်ပါ, 30564 သင်၏ကိုယ်ပိုင် Monster သို့မဟုတ်ယာဉ်များပြုလုပ်ပါ, စာချုပ်, အပေးအယူ, အခမဲ့ LEGO, Lego, lego သဘောတူညီချက်, lego အပေးအယူ, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, Lego ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, Lego စတိုး, Lego စတိုးပြက္ခဒိန်, Lego စတိုးဆိုင်များ, ပေးကမ်း, ကမ်းလှမ်းချက်များ, ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, စက်တင်ဘာလ
အဆိုပါ Lego စတိုး စက်တင်ဘာလအတွက်ပြက္ခဒိန် ထင်ရှားခဲ့သည် အချိန်မီ၊ အခမဲ့နှစ်ခုအပါအ ၀ င်ရှေ့လ၌ကမ်းလှမ်းမှုများကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ကွမ်းခြံကုန်း.
သြဂုတ်လကုန်ခါနီးမှတရားဝင်အွန်လိုင်းပေါ်ရှိအပေးအယူအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်သည် Lego စတိုး အခမဲ့အစုံလ၏လသစ်သို့ကူးပြောင်းတော့မည်၊ အဓိကကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုသည်စက်တင်ဘာလ၌အချိန်တိုသာကြာသည်။ အမေရိကန်စတိုးဆိုင်ပြက္ခဒိန်၏ဗားရှင်းကိုယခုအချိန်ထိသာဖြန့်ချိခဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ၊ ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်အခြားဒေသတွေမှာဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာကိုလျောက်ပတ်စွာညွှန်ပြသည်။
မှအပေါ်ကိုအောက်ပါ သြဂုတ်လရဲ့ဘန်ပါလ လက်ဆောင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောမော်ဒယ်များ၊ Lego Group သည်စက်တင်ဘာလအတွက်အရာများကိုငြိမ်သက်စေပြီးစျေး ၀ ယ်သူများကိုတစ်ခုမပေးဘဲနှစ်ခုအခမဲ့ပေးလိမ့်မည် ကွမ်းခြံကုန်း.
ဒေါ်လာ ၅၀ နှင့်အထက်မှာယူသူတိုင်းကို ၃၀၅၆၃ ပုံစံဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ခရုကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ခရုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ၊ ၃၀၅၆၄ ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင် Monster သို့မဟုတ်ယာဉ်များဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ဒီသဘောတူညီချက်ဟာစက်တင်ဘာ ၂၀ ကနေစက်တင်ဘာ ၃၀ အထိဖြစ်ပြီးကျန်လရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဟာသဘောတူညီမှုအသစ်တွေမပါဘဲကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စုံသည်သင်ဖန်တီးထားသောအပိုင်းအစများကို သုံး၍ သင်စိတ်ကူးထားသောအရာများအား သုံး၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံများကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့် open-end building အတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်။ ပိုးအိစံ.
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စက်တင်ဘာလမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ့်တစ်ခုတည်းသောကမ်းလှမ်းချက်ကဒီနှစ်လိုမျိုးအစောပိုင်းထဲကပါ အခမဲ့ VIP keychain အစီအစဉ်အသစ်နှင့်နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်များအတွက် Super Mario 30389 Fuzzy & Mushroom Platform Expansion Set စက်တင်ဘာ ၅ ရက်အထိ£ 40 / $ 40 / € 40 အထက်အော်ဒါများ
← LEGO ပေါက်ကြားပြီလား Star Wars UCS 75313 AT-AT?
LEGO Originals Wooden Minifigure ကိုတိုးချဲ့ရန်အခန်း Copenhagen →